ဟိုတယ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ ချစ်သော မိန်းမရဲ့ နဖူးလေးကို ဖွဖွလေး အနမ်းလက်ဆောင်ပေးပါတယ်။
အရင်ဆုံး Alarm ပြန်စစ်ပါတယ်။ နောက်တော့ ဘုရားရှိခိုး… ပြီးရင် အိပ်…
ခေါင်းအုံးနဲ့ ခေါင်းနဲ့ထိတာနဲ့ Alarm ပြန်မြည်မှ နိုးတော့တယ်။
တအားစိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ
အဲ့ဒီလိုကြီးတော့ မဖြစ်ဖူးဘူး။ စိတ်ညစ်လာရင် လုပ်နေကျ အလုပ်ထဲကို ပိုပြီး အာရုံစိုက်လိုက်တယ်…
ဟိုတယ် ကဒ်၊ ပိုက်ဆံအိတ်၊ ပက်စပို့၊ ဖုန်း၊ လက်အိတ်၊ ခေါင်းစွပ်။
အွမ်… လောလောဆယ်တော့ အလုပ်တူတူလုပ်နေတဲ့ တရုတ်တစ်ယောက်ပဲရှိတယ်။ သူ့ပဲ
အဲ့ဒါလည်း ဘာကြိုက်လို့ကြိုက်မှန်းကို မသိ။
တရုတ်နှစ်သစ်ကူး မြန်မြန်ရောက်ပါစေ…. ဒါမှ အလုပ်နားပြီး ဟို ဟို ဒီ ဒီ ခြေ သရမ်းလို့ရမှာ…..
Posted by AH at 1/07/2012 11:45:00 AM
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် January 7, 2012 at 12:39 PM
ပျော်ရွှင်စရာဘ၀လေးပါပဲ နှစ်ကူးမြန်မြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် လွင်ပြင်လဲ မြန်မြန်ရောက်စေချင်တယ် ဒါမှ အန်ဖတ်လေး ဘာလေးရမှာလေ ဟိ
Q-te January 7, 2012 at 1:12 PM
များမှာ တရုတ်ရည်စား တော်မိလို့ တရုတ်တူလေးကို အန်ပေါင်းပေးရတာ နှစ်တိုင်း နှစ်တိုင်း .....(ချစ်ဖို့တော့ ကောင်းသား ဒေါ်လေး ဘာမှ မပူနဲ့ ဒီဦးလေးမကြိုက်ရင် နောက်ထပ်ဦးလေးတွေ အများကြီးရှိသေးတယ်တဲ့ :D :D ) တရုတ်နှစ်ကူးမှာ အန်ပေါင်းတွေ များကြီးရပြီ ခွင့်ရက်ရှည်ရပါစေ
ကိုထွဋ် January 7, 2012 at 1:49 PM
ဝက်ပုံးတဲ့..တူတူပဲ..တားလည်းစားချင်တယ်. တူများလို မွမွပေးစရာမရှိတော့ ဖက်ခေါင်းအုံးကိုပဲ မွမွရတော့ပေါ့။
စံပယ်ချို January 7, 2012 at 2:34 PM
ဘာကြိုက်လို့ ကြိုက်မှန်းမသိတဲ့ ကောင်းလိုက်တာ
ညိမ်းနိုင် January 7, 2012 at 3:02 PM
ထောင်ရဲ့....:P စတာ...။ဒီတနင်္ဂနွေတောင် ဝက်ပုန်းချက်စားမလား စဉ်းစားနေ
ဘိုဖြူ January 7, 2012 at 6:12 PM
Candy January 7, 2012 at 10:43 PM
စားမကောင်းတာကို စားမကောင်းဘူးတွေးမှတော့ ပိုဆိုးတော့မှာပေါ့ ကိုAH ရယ် :P
Angelhlaing(May everybody be happy and healthy! January 8, 2012 at 1:17 AM
တဂ်ပို့စ်လေးကို ရိုးစင်းစွာနဲ့ ပုံဖော်ထားတယ်ပေါ့...
ဘာကိစ္စ ဘဲလိုအော်ရတာဒုန်း ဂတ် ဂတ် ဂတ်လို့